Ergayga Q.M ee Soomaaliya oo xafiiska banaynaya. – The Voice of Northeastern Kenya
Ergayga Q.M ee Soomaaliya oo xafiiska banaynaya.
Star FM September 5, 2018
Waxaa dhammaaday waqtiga shaqada uu dalka Soomaaliya ka hayay ergayga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan arimaha dalka Soomaaliya Micheal Keating oo xafiiska la wareegay bishii Janaayo ee sanadkii 2016-kii.
Mr Keating oo waqtiga uu hada ka dhammaaday islamarkaana baneynaya xafiiska Jimciyada Qaruumaha ka dhexaysa ee Soomaaliya ayaa waxaa bedeli doono Nicholas Haysom oo u dhashay dalka Koonfur Afrika.
Masuulkan cusub ee loo soo magacaabay xafiiska QM ee dalka Soomaaliya waxaa da’diisa lagu sheegay 66 sano jir sidoo kalen wuxuu horay u ahaa Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan dalalka Suudaan iyo Koofurta Suudaan, markale ayuuna soo noqday Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan arimaha dalka Afghanistan.
Sarkaalkan cusub oo ah Qareen ayaa ku taqasusay arrimaha dimoqraadiyada, dowlad wanaagga, dib u heshiisiinta, nabadeynta iyo dib u habeynta, wallow uusan ku guulaysan inuu xal waara ka dhaliyo wadanka qaarada Africa ugu da’da yare ee Koonfurta Sudaan oo shanti sano ee la soo dhaafay ay colaado sokeeye ka taagnaayeen.
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobey u qaabilsan arimaha dalka Soomaaliya Micheal Keating ayaa dalka Soomaaliya ka soo howl galayay ku dhawaad sadex sano.
← Maxkamada sare oo diiday inay hakad geliso dhaqangelinta canshuurta lagu kordhiyay shidaalka
DHAGEYSO warka subaxnimo ee idaacada star fm 8:00 PM →